… Ka inona no mbola mampahantra antsika ? | NewsMada
« Mahantra eo ambonin’ny harembe ny Malagasy… ». Tato ho ato, malaza io fehezanteny io na koa hoe nampalaza ity Nosy ity hatrany ivelany any mihitsy. Tsy mety mihidy mantsy ny « robinet » ivoahan’ny andramena sy ny harem-pirenena isan-karazany, tsy voatanisa, mankany ivelany.
« Ampiharo ny lalàna », hoy ny mpitondra amin’ny kabary, manoloana ity tranga manaratsy endrika azy ireo ity, saingy, inona moa no idiran’ny valalabemandry amin’izany ? Asa… Angamba, any amin’ny tena atidoha mpikotrika ny « afera » sy ny mpampihatra lalàna, izay tsy tokony ho voavidy vola, no miantefa izany baiko izany.
Tsy io no tian-kambara raha napetraka ny fanontaniana hoe fa inona tokoa moa ny mbola mampahantra antsika Malagasy e ? Tsy maninona raha lasan’ny olom-bitsy any aza ny harena iombonantsika, satria mbola misy ny vahaolana ary tsy tokana. Indraindray aza, valalanina ihany maheno azy ireny. Aiza no haleha ? Iza no tena mahomby sy marina ?
Izay indrindra… Ireto karazam-pivavahana ireto re izany e ! Samy manana ny anarany, ny fototra ijoroany sy izay tena inoany, sns, izy ireny. Raha tena dinihina kosa, toa mitovy ihany ny tanjona kendreny : ny hampiadana sy ny hahasambatra ny Malagasy. Tsy misy olana tsy voavaha.
« Mikorontana ny tokantranonao ? Maditra ny ankizy sa tsy mety miverina amin’ny laoniny ny fifandraisana eo aminareo mivady ? Tena mety aminao ny manaraka ny fotoam-bavaka isaky ny alatsinainy… Te hanangana tetikasa ianao ary te hahomby amin’izany ? Natao ho anao mihitsy ny vavaka isaky ny talata… Misokatra tsy an-kiato ny varavaran’ny fiangonana ary misy mandray anao sy manampy anao hamaha ny olanao hatrany ao », hoy ny « dokambarotra » iray, manentana ny olona hanamaro isa ny mpiangona ao aminy.
Santionany io fa saika toy izany ny ankamaroan’ny fanentanana ataon’izy ireny, izay toa mahomby. Ny mahagaga fotsiny, hatreto aloha, miaina anaty fahantrana lalina ny ankamaroan’ny Malagasy. Tsy manan-toerana ny fihavanana fa manjaka ny korontana eo amin’ny mpianakavy.